ငါ့ကြောင်ဖျားနေလား။ - ၎င်းကိုရှာဖွေရန်မည်သည့်လက္ခဏာများရှိသနည်း။ အ | Bezzia
Susana godoy | 13/10/2021 16:00 | ချစ်. ကစား
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များစကားပြောဆိုခြင်းမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အမြဲပြောလေ့ရှိသည်မှာကျွန်ုပ်တို့မှန်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီအပြင်သူတို့ကငါတို့ကိုလှုံ့ဆော်မှုတွေပေးပြီးသူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်မှုတွေကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိပုံရတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့အမြဲအမှတ်ရနေတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိတယ်။ ငါ့ကြောင်ဖျားနေတယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လိုပြောရမလဲ။
တခါတရံမှာငါတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလက္ခဏာတွေကိုမြင်နိုင်ပေမယ့်ဒါကအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကလိုအပ်တာထက်ပိုစိုးရိမ်ရတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါတို့မင်းကိုစတော့မယ်ဆိုတဲ့သဲလွန်စအချို့နဲ့မင်းကိုထားခဲ့မယ် တစ်ခုခုဖြစ်နေတာကိုသံသယဝင်တယ် ထို့ကြောင့်သင်၏သံသယကိုလုံးဝဖယ်ရှားရန်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသို့အမြန်ဆုံးသွားရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းသည်တစ်ခုခုဖြစ်နေကြောင်းသိသာထင်ရှားသည့်လက္ခဏာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာကယာယီအရာတစ်ခုသာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကသိသာတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ သူသည်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျပြီးအန်ခြင်းနှင့်အတူပါလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်လျှင်ပြောစရာမရှိတော့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အခြားအချိန်တွေမှာတော့အပြောင်းအလဲကိုပေးတတ်ကြတယ် ၎င်းတို့ကိုပုံမှန်ထက်ပိုစားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာ (သို့) ဆီးချိုရောဂါအကြောင်းပင်ပြောဆိုနေနိုင်သည်.
သင်သိသည့်အတိုင်းကြောင်များသည်အလေ့အကျင့်ရှိသောတိရစ္ဆာန်များဖြစ်သည်။ သူတို့မှာသူတို့ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေရှိပြီးအဲဒါတွေကိုပြောင်းလဲဖို့သူတို့အတွက်အရမ်းခက်ခဲတယ်မရ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်ဤအရာသည်ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုသင်သတိပြုမိသောအခါ၊ သူတို့လုပ်နေတာကိုဆက်မလုပ်ဘဲနေလျှင်၊ ငါ့ကြောင်နေမကောင်းမေးရန်အချိန်တန်ပြီ။ ဥပမာ၊ သူတို့ကအရမ်းသန့်ရှင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းအရင်အတိုင်းမသန့်ရှင်းဘူးဆိုတာကိုသတိထားမိရင်၊ အဲဒါကတခြားအစွန်းရောက်သွားပြီးသန့်ရှင်းရေးကအလွန်အကျွံလုပ်ရင်အဲဒါကတစ်ခုခုဖြစ်နေတာဆိုတာကိုသဲလွန်စပေးလိမ့်မယ်။
ဒီအချိန်မှာငါ့ကြောင်ဖျားနေလားဆိုတာသိဖို့ခက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအိပ်တယ်၊ သူတို့ကနာရီအများကြီးအိပ်တယ်မရ။ ဒါပေမယ့်သူကပုံမှန်ထက်မျက်လုံးတွေမှိတ်ပြီးအချိန်ပိုသုံးနေသေးတာကိုသင်သတိထားမိရင်သူကဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတာဒါမှမဟုတ်အရမ်းစာရင်းမ ၀ င်တာကိုသတိထားမိရင်တစ်ခုခုမှားနေပြီ။ တစ်ဖန်သူ၏အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုတိုင်ပင်ရန်သင့်ကိုယ်သင်ကျွမ်းကျင်သူလက်၌ထားရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
သူမဆံပင်တွေကတောက်ပတဲ့အထိအတွေ့ကိုဘယ်လိုပေးလဲဆိုတာကိုငါတို့အရမ်းသဘောကျတယ်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပနှင့်ထပ်တူကျသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်တခါတရံမှာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုငါတို့မြင်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ တောက်ပမှုပျောက်ဆုံးသွားသည်ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်ပိုရှုပ်ထွေးနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ထိုနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုစတင်သံသယဝင်ကြလိမ့်မည်။ အခြားတဖက်တွင်မူ, ဟုတ်သည်၊ ၎င်းသည်အချို့သောရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အခြားအရာသည်အစားအစာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်မရ။ ဆိုလိုသည်မှာတိရိစ္ဆာန်သည်အာဟာရမပါ ၀ င်သောအာဟာရတန်ဖိုးများကိုလိုအပ်သည်။
ထိုသို့မှန် သွားဖုံးများသည်ပန်းရောင်ဖြစ်လေ့ရှိပြီး၎င်းသည်ကျန်းမာရေး၏အခြေခံအခြေအနေကိုညွှန်ပြသည်မရ။ ဒါပေမယ့်တခါတရံမှာသူတို့မှာအဖြူရောင်ပေါ်လာတာကိုငါတို့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောင်များတွင်ရောဂါတစ်ခုခုရှိနေကြောင်းသိသာထင်ရှားသောနောက်ထပ်လက္ခဏာများမှာဤအချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်တစ်ခုမှာသွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်သော်လည်းအခြားအလွန်ကွဲပြားသောအကြောင်းများရှိနိုင်သည်မှာအမှန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်ပါကရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအပြင်အားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတို့ပါတွဲပါလာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သံသယများကိုဖယ်ရှားရန်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်နှင့်အမြဲတိုင်ပင်သင့်သည်။
သူတို့ကနည်းနည်းပျင်းနေပြီဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကစားတဲ့အခါမှာသူတို့ကသူတို့အားလုံးကိုပေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်ရုတ်တရက်ပြင်းထန်သောအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုသင်သတိပြုမိလျှင်ဒါဟာနောက်ကွယ်ကတစ်ခုခုကိုငါတို့ကိုသတိပေးနေတာဘဲ။ သူကမကစားချင်ဘူး၊ နည်းနည်းစာရင်းမ ၀ င်ဘူးဆိုရင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုခုရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုတည်းနှင့်နိဂုံးတစ်ခုတည်းကိုအာရုံမစိုက်နိုင်ပေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » ချစ်. ကစား » ငါ့ကြောင်ဖျားနေတယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လိုပြောရမလဲ။